old age – Healthy Life Journal
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆောင်းတွင်းမှာ အသက်ကြီးသူတွေ၊ အထူးသဖြင့် အိမ်ထဲမှာပဲ အနေများတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ ထိုင်းမှိုင်းငြီးငွေ့တာ စတာတွေ အဖြစ်များသလို အပြင်ထွက်ရင်လည်း လေအေးတိုက်ခတ်တာကြောင့် အအေးမိဝေဒနာနဲ့ တုပ်ကွေးဖြစ်လွယ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာနေစေဖို့ အသက်ကြီးသူတွေ ဆောင်းတွင်းကာလတစ်လျှောက်လုံး...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) အသက် ၈၀ ကျော်အရွယ်ဆိုရင် တတိယအရွယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ အစားအသောက်က တော်တော်ကို နည်းသွားပါပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုနှုန်း (Metabolic Rate) ကလည်းနည်းသွားပြီ၊ ပြီးတော့ အာဟာရဓာတ်တွေကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းအားကလည်း နည်းသွားပါပြီ။ အစာကို ချေဖျက်နိုင်စွမ်းကလည်း...
အသက်ကြီးလာပေမယ့် မှတ်ဥာဏ်မပျက်စီးအောင် . . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှာကို လူအများစု ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ ကိုယ်ရင်းနှီးတဲ့ လူတွေရဲ့နာမည်၊ ပြောမယ့်စကားလုံးတွေ၊ အချက်အလက်တွေနဲ့ မျက်နှာတွေကို မေ့လျော့တဲ့အခါ ဘ၀မှာ အလွဲလွဲအမှားမှား တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဦးနှောက် မှာရှိတဲ့ ဟစ်ပိုကမ်းပက်စ်နေရာဟာ မှတ်ဥာဏ်နဲ့ သင်ယူလေ့လာမှုတို့နဲ့...
၆၀ကျော်အရွယ်ရောက်နေလျှင်ပင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါက ကောင်းကျိုးရနိုင်သေး
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်သုတေသီတွေက ဆေးလိပ်လုံးဝမသောက်သူ၊ အရင်က သောက်ဖူးသူနဲ့ လောလောလတ်လတ်သောက်သုံးဆဲသူတွေပါဝင်တဲ့ အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေကို ၆ နှစ်ကြာ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာက အချိန်နောက်ကျတယ်မရှိဘူးလို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၇၀...
တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းပျက်စီးလာတဲ့ ရောဂါ . . .
မေး။ ။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျွန်မအမေအတွက် မေးချင်လို့ပါရှင်။ အမေက အသက် ၇၀ ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က စကားပြောခြင်း၊ လုပ်တာကိုင်တာ တလွဲတချော် ဖြစ်လာခြင်း၊ ဒေါသကြီးခြင်းစတဲ့ မူမမှန်မှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့် ဆရာဝန်တွေနဲ့ ပြသပါတယ်။ အမျိုးမျိုး ကုသပေမယ့်...